စိတ်ကြိုက်စက်မှုလုပ်ငန်းအစာစားအစားအစာအသီးအသီးဟင်းသီးဟင်းရွက်အပူခြောက်စက်ခြောက်စက်ခြောက်စက်ထုတ်လုပ်သူမှ | Twesix
ဤလေထုအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက်အပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက် / dehydrer ကိုစိုက်ပျိုးရေး, စက်မှုလုပ်ငန်း, ဆေးပညာနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်သစ်သီး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, အသားများ, ငါးများကဲ့သို့သောအရာများကိုခြောက်သွေ့စေရန်အသုံးပြုသည်& အရွက်, သစ်သား, စက္ကူ roller, နံ့သာပေါင်း,
Twesix စိတ်ကြိုက်စက်မှုလုပ်ငန်းအစာစားအစားအစာအသီးအသီးဟင်းခတ်အအေးလေယာဉ်ခြောက်စက်ခြောက်စက်ခြောက်စက်ခြောက်စက်ခြောက်စက်ပြင်စက်များမှထုတ်လုပ်သူများ, Copeland Compressror နှင့် Schneider Electronics Components
လေလည်ပတ်မှု - အစာကိုခြောက်သွေ့စေရန်နှင့်ဘက်တီးရီးယားများနှင့်ပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချပါ။ ဒီစက်ကမင်းရဲ့အစားအစာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်လိမ့်မယ်,
စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း - အချိန်အတန်ကြာတွင်သင်၏အစားအစာ။ သင်၏အစားအစာခြောက်သွေ့သောအချိန်ကိုသင်စွန့်ပစ်သည့်အချိန်ကိုမေ့လိုက်ပါ။ မည်သည့်ကျန်းမာသောအစားအစာများအတွက်မဆိုလာမည့်မ်ား - ရှိသည်။ အများဆုံးအထိရောက်ဆုံးခြောက်သွေ့သူကိုမိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် Twsixryer သည်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း, ရေထိရောက်မှုနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။
နှစ်ဆ အစားအစာခြောက်သစက်စက်ကိုလုံခြုံရေးစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဤစမ်းသပ်မှုများသည်ရောင်ရမ်းခြင်း / မီးခံမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း, ဦး ဆောင်အကြောင်းအရာစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလုံခြုံမှုစစ်ဆေးခြင်းကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။
အာရှ, ဥရောပ, အာဖရိက, တောင်အမေရိက, နယူးဇီလန်, Austrilysia
答: Tsix အစားအစာခြောက်သွေ့စက်များကိုအမျိုးသားအဆင့်နှင့်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရတင်းကြပ်စွာထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လက်မှတ်များနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများရှိသည်
3.0န်ဆောင်မှုအပြီးနှင့်အတူ 3. လက်ကိုင်များအတွက်အဖွဲ့
4.Copeland compressor နှင့် Schneider အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်သွေ့စက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်စက် သစ်သီးခြောက်ခြောက်စက် ပူပြင်းတဲ့လေ ပူပြင်းတဲ့လေ သစ်သီးခြောက်စက်စက်